သူမကို ဒီချိန်မှာ ပါတီစွဲမလုပ်ရဘူး လို့ လာပြောတဲ့ သူကို တိကျပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ချက်ကျ လက်ကျ ထောက်ပြ ပြောဆို လိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သူမကို ဒီချိန်မှာ ပါတီစွဲမလုပ်ရဘူး လို့ လာပြောတဲ့ သူကို တိကျပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ချက်ကျ လက်ကျ ထောက်ပြ ပြောဆို လိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
သူမကို ဒီချိန်မှာ ပါတီစွဲမလုပ်ရဘူး လို့ လာပြောတဲ့ သူကို တိကျပြတ်သားတဲ့ စကားလုံးတွေ နဲ့ ချက်ကျ လက်ကျ ထောက်ပြ ပြောဆို လိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အချစ်တော် အကယ်ဒမီသက်မွန်မြင့်ဟာ ဆိုရင် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို တိကျပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုး နဲ့ခေါ်ကြတဲ့ ချစ်သက်က သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာအင်မတန်မှထူးချွန်လှပြီး သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာလေးက ပရိတ်သတ်တွေ ကို အချစ်ပိုစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ တိုင်းရင်းသူမလေးချစ်သက်ကရဲ့ စကားပြောပုံလေးက ဆိုရင်လည်း ပရိတ်သတ်တွေကို ထူးထူးခြားခြား ဆြွဆောင်မှုရှိနေတာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်.။
ချစ်သက်က သူမကိုအရမ်းချစ်ပြီးွှရမ်းအလိုလိုက်တဲ့ ခင်ပွန်းအပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားလေး နဲ့မီးမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သားယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားဆုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်တဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း သက်မွန်ဟာ နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း သူမကို ဒီချိန်မှာပါတီစွဲ မလုပ်ရဘူးလို့ ကွန့်မန့် မှာလာပြောတဲ့သူကို အခုလိုပဲ ချက်ကျလက်ကျထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာပဲဖစ်ပါတယ်နော်။ သက်မွန်က “ဒီချိန်မှာ ပါတီစွဲ မလုပ်ရဘူးတဲ့ သက်မွန်ကို ကွန်မန့်မှာ လာပြောတယ်!သက်မွန် လေးစား ရတဲ့ အမေစုက NLD ဆိုမှတော့ ကိုယ်လည်း NLD ပေါ့! ရှင်းနေတာကိုတခြား ဘယ်သူများ သူ့လောက် လေးစား အားကိုးစရာ ရှိလို့လဲဟင်?? စဉ်းစားကြည့်ပါ! ကမ္ဘာတဝန်းက လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့, မျက်နှာချီ ရင်ကော့ပြီး လျှောက်နိုင်တဲ့သူ( အရည်ချင်းပြည့်လျှံနေလို့ကို ယုံကြည့်မှုအပြည့်နဲ့ လျှောက်ရဲတာ) နဲ့ပြည်တွင်းမက တကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းလက်ညှိုးထိုး ရှုံ့ချခံရသူ ဘယ်ခေါင်းဆောင်အောက် မှာ သင် နောက်လိုက်ဖြစ်ချင်သလဲ?
ရာစုတွေနဲ့ချီပြီး အုပ်ချုပ်မှုမှာ ပြည်သူကလွဲ သူတို့ ချမ်းသာသွားတာ နဲ့ သူတို့ကလွဲ ပြည်သူ ချမ်းသာသွားတာ ( ဒါတောင် ၅ နှစ်ထဲနော်)ဘယ်သူ့ကို သင် ယုံကြည်မလဲ? မေတ္တာတရား ကြီးမားပြီး ပြည်သူသည်သာ အဓိက ဆိုတဲ့သူနဲ့ သူ့တဘို့ အတ္တတွက် သန်းချီ ပြည်သူ ပူဆွေးသောက ဒုက္ခရောက်စေသူ ဘယ်သူက သင့်ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမယ်လို့ ယုံကြည်သလဲ???ခုလည်း လက်တွေ့ မြင်နေရတယ်မလား?အကြောက်တရားတွေနဲ့ ရှင်သန်ရတဲ့ ဘဝ ရွေးချင်သေးလား?? ဖိနှိပ်မှုတွေ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ အဓမ္မတွေနဲ့ ရှင်သန်ရမယ့် ဘဝကို မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီအရေးတော်ပုံ အောင်ရေး သင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ပေးပါ! အဓိက သော့ချက် CDM ! CDM လုပ်ပြီး သူရဲကောင်းအဖြစ် မှတ်တမ်း အတင်ခံမလားနိုင်ငံ့သူပုန်အားပေး အဖြစ် မျက်နှာအငယ်ခံမလား အခွင့်အရေးဆိုတာ ၂ ခါပြန် မရဘူးနော်! ” ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရင်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြထေားပါတယ်.။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး ကို အထူးပဲကျေးခူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပရိတ္သတ္ရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ အကယ္ဒမီသက္မြန္ျမင့္ဟာ ဆိုရင္ က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို တိက်ပိုင္ႏိုင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အကယ္ဒမီဆုႀကီးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ပရိတ္သတ္ေတြခ်စ္စႏိုး နဲ႔ေခၚၾကတဲ့ ခ်စ္သက္က သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာအင္မတန္မွထူးခြၽန္လွၿပီး သူမရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ မ်က္ႏွာေလးက ပရိတ္သတ္ေတြ ကို အခ်စ္ပိုေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္..။ တိုင္းရင္းသူမေလးခ်စ္သက္ကရဲ႕ စကားေျပာပုံေလးက ဆိုရင္လည္း ပရိတ္သတ္ေတြကို ထူးထူးျခားျခား ႂဆြေဆာင္မႈရွိေနတာဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူးေနာ္.။
ခ်စ္သက္က သူမကိုအရမ္းခ်စ္ၿပီးႊရမ္းအလိုလိုက္တဲ့ ခင္ပြန္းအျပင္ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားသားေလး နဲ႔မီးမီးေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သားယာေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားဆုေလးကိုပိုင္ဆိုင္ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္တဲ့ အေျခအေနမွာဆိုရင္လည္း သက္မြန္ဟာ ေန႔တိုင္းလမ္းေပၚထြက္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လည္း သူမကို ဒီခ်ိန္မွာပါတီစြဲ မလုပ္ရဘူးလို႔ ကြန႔္မန႔္ မွာလာေျပာတဲ့သူကို အခုလိုပဲ ခ်က္က်လက္က်ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့တာပဲဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ သက္မြန္က “ဒီခ်ိန္မွာ ပါတီစြဲ မလုပ္ရဘူးတဲ့ သက္မြန္ကို ကြန္မန႔္မွာ လာေျပာတယ္!သက္မြန္ ေလးစား ရတဲ့ အေမစုက NLD ဆိုမွေတာ့ ကိုယ္လည္း NLD ေပါ့! ရွင္းေနတာကိုတျခား ဘယ္သူမ်ား သူ႔ေလာက္ ေလးစား အားကိုးစရာ ရွိလို႔လဲဟင္?? စဥ္းစားၾကည့္ပါ! ကမာၻတဝန္းက ေလးစားခ်စ္ခင္ရတဲ့, မ်က္ႏွာခ်ီ ရင္ေကာ့ၿပီး ေလွ်ာက္ႏိုင္တဲ့သူ( အရည္ခ်င္းျပည့္လွ်ံေနလို႔ကို ယုံၾကည့္မႈအျပည့္နဲ႔ ေလွ်ာက္ရဲတာ) နဲ႔ျပည္တြင္းမက တကမာၻလုံးက ဝိုင္းလက္ညႇိဳးထိုး ရႈံ႕ခ်ခံရသူ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ေအာက္ မွာ သင္ ေနာက္လိုက္ျဖစ္ခ်င္သလဲ?
ရာစုေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ျပည္သူကလြဲ သူတို႔ ခ်မ္းသာသြားတာ နဲ႔ သူတို႔ကလြဲ ျပည္သူ ခ်မ္းသာသြားတာ ( ဒါေတာင္ ၅ ႏွစ္ထဲေနာ္)ဘယ္သူ႔ကို သင္ ယုံၾကည္မလဲ? ေမတၱာတရား ႀကီးမားၿပီး ျပည္သူသည္သာ အဓိက ဆိုတဲ့သူနဲ႔ သူ႔တဘို႔ အတၱတြက္ သန္းခ်ီ ျပည္သူ ပူေဆြးေသာက ဒုကၡေရာက္ေစသူ ဘယ္သူက သင့္ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမယ္လို႔ ယုံၾကည္သလဲ???ခုလည္း လက္ေတြ႕ ျမင္ေနရတယ္မလား?အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ရွင္သန္ရတဲ့ ဘဝ ေ႐ြးခ်င္ေသးလား?? ဖိႏွိပ္မႈေတြ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြ အဓမၼေတြနဲ႔ ရွင္သန္ရမယ့္ ဘဝကို မလိုခ်င္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီအေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ေရး သင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ပါဝင္ေပးပါ! အဓိက ေသာ့ခ်က္ CDM ! CDM လုပ္ၿပီး သူရဲေကာင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္း အတင္ခံမလားႏိုင္ငံ့သူပုန္အားေပး အျဖစ္ မ်က္ႏွာအငယ္ခံမလား အခြင့္အေရးဆိုတာ ၂ ခါျပန္ မရဘူးေနာ္! ” ဆိုၿပီးသူမရဲ႕လူမႈကြန္ရင္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေထားပါတယ္.။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီး ကို အထူးပဲေက်းခူးတင္ရွိပါတယ္ေနာ္။
Previous post ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရရှိရေး အတွက် သူမရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အတူတူ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
Next post ပြည်သူတွေ ရဲ့ ရှေ့ဆုံး ကနေ ပုံစံ တစ်မျိုး နဲ့ ရောက် လာတဲ့ ပိုင်တံခွန်